Sesivele sinathi phakathi kwethu i-ROSA Linux Marathon 2012 Final | Kusuka kuLinux
Sivele sine-ROSA Linux Marathon 2012 Final phakathi kwethu
Kusukela izolo, isimemezelo esisemthethweni (ngesiRussia) sivele lapho babike khona ngokutholakala kwenguqulo yokugcina yalokhu kusatshalaliswa okukhulu, nansi ingxenye yesitatimende esishiwoyo:
Inkampani yeROSA iyajabula ukubika ukuthi isiqedile umsebenzi kuhlelo lokusebenza lwe-ROSA Marathon 2012 (ukusatshalaliswa kweLinux ngokusekelwa okunwetshelwe eminyakeni emihlanu, ikakhulu igxile kumakhasimende ebhizinisi).
Yebo, lokhu kusho ukuthi inhloso enkulu yale distro ukuzinza nokukhiqiza, kungaba yinto efana nohlobo lweDebian Stable, kepha kulabo bavakashi abathanda i-adrenaline futhi abaphethwe yi-versionitis (njengami XD), iRosaLabs us inesimanga esihle :
Ngokwethulwa kwe-ROSA Marathon 2012, kuzogxila kakhulu enkampanini ekulungiseleleni uhlelo olusha lokusebenza I-ROSA Desktop 2012, okulindeleke ukuthi ikhishwe ekupheleni konyaka. Uma kuqhathaniswa neMarathon, inguqulo yeDeskithophu izogxila ikakhulu kubasebenzisi bedeskithophu, ifuna izici zokusika, izinhlobonhlobo zamathuba wokwenza ngokwezifiso zesistimu, nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Uma noma ngubani efuna ukwazi kabanzi ngalokhu kusatshalaliswa angakufunda lokhu isihloko. IRosaLinux, inezinguqulo ezi-2, i- MAHHALA kufaka kuphela i-Free Software kanye ne EE kufaka phakathi isoftware ephathelene (Ngaphandle kwebhokisi).
Umthombo: I-RosaLabs Blog Esemthethweni
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Sivele sine-ROSA Linux Marathon 2012 Final phakathi kwethu
Mngani Perseus, wena ongumhloli wawo wonke ama-distros ashicilelwe, mhlawumbe usuvele ufake uRosa, ngakho-ke silindele ukuphawula kwakho kochwepheshe.
Impela, ngithembisa ukubuyekeza le distro enkulu kungekudala - futhi ngiyabonga nge-XDDD yokuncoma
Sawubona, ngisanda kufaka ukusatshalaliswa futhi imizwa mihle kakhulu. Kepha nginombuzo ... ngifakele abashayeli be-nvidia kumphathi wephakeji, ngivuselele uhlelo futhi lapho ngiqala izintandokazi ze-nvidia ithi kufanele ngiqale umyalo "nvidia-xconfig" empandeni. Ngiqala umyalo futhi lapho ngiwuqala kabusha ngemodi yombhalo. Omunye angangisiza?. Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili, imikhonzo.
Kungenzeka ukuthi uphuthelwe ukufaka ukuncika okungeziwe, kepha sihamba ngezinyathelo, uma usuqale uhlelo lwakho futhi ungena ngemodi yombhalo, thayipha:
Njengomsebenzisi ojwayelekile, uma uthola umyalezo wephutha, unamathisele, uma uqala imvelo yokuqhafaza iyaxwayisa futhi sibona ukuthi singawaxazulula kanjani womabili amacala;
Ngikhohliwe, ungasebenzisa isithangami sethu ukuveza ukungabaza kwakho, izinkinga njll.
Iyangidonsa, kepha ngicabanga ukuthi ngeke isebenze kahle kwi-netbook yami
Ngiyabonga kakhulu ngokuphendula. Yebo, ngizamile futhi ukuqala nge-startx futhi impikiswano iyaqhubeka nokuvela, kungitshela ukuthi ukuthola eminye imininingwane thintana /var/log/Xorg.0.log futhi ngisesha ngibona le ngxabano elandelayo: qala isandiso se-GLX (Umshayeli we-NVIDIA X ohambisanayo akatholakali). Ngiyabonga
- faka kabusha umshayeli
- susa i-xorg.conf noma uyibuyisele emuva bese wenza okusha
Yebo, kukhombisa ukuthi umshayeli akazange afakwe kahle. Ukukhiqiza ifayela elisha le-Xorg:
kopisha noma uhambise ifayela elisha xorg.conf.new uye ku / etc / X11:
ngalokhu uzokwazi ukufinyelela kwimvelo yokuqhafaza futhi, ngokuhamba kwesikhathi ungaphinde ufake umshayeli we-nvidia, sikufisela inhlanhla;).
Lutho, ayikho indlela yokuqhuba umshayeli we-Nvidia ophethe. Sengivele ngikwazile okungenani ukuba semodini ejwayelekile. Ukubuyela ukufaka kabusha abashayeli, ngiyabona ukuthi bangeze i-readme ephawula ukuthi kufanele uyikhombise ngohlelo lwe-XFdrake, ngilandela izinyathelo zabo futhi ihlale imaka i-Intel 810 futhi ngokuhamba kwesikhathi, ngizama ukushintshela umshayeli ku-GeForce 400 series nakamuva Ngicabanga ukuthi iphutha «(EE) Awekho amadivayisi atholakele. '. Ngiyabona ukuthi i-GF108 (GeForce GT 540M) ne-2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bathola amakhadi kumphathi wehadiwe. Iqiniso ukuthi angisazi ukuthi ngenzeni ... Ngiyabonga
Kuthiwani ngobhuti, ngincoma kakhulu ukuthi udalule inkinga yakho esithangamini sethu, ngoba imvamisa iyindawo ekahle yokwenza lokhu, lapho sinabantu abaningi abangakunika ikhebuli ukuze uyixazulule (ukunxenxa umlingani wethu @Anububhi umphathi weqembu le-mandriva XD) :).
Nota: Okwamanje isithangami sethu sinezinkinga: (, sethemba ukuthi le nkinga ayihlali isikhathi eside;).
Ngiyabonga ngiyaxolisa, empeleni bengizoyithumela lapho, kepha njengoba ngibonile ukuthi ibiphansi angikakwenzi. 🙂
Emizuzwini embalwa edlule isithangami siku-inthanethi 😀
I-distro enhle kakhulu, ne-Klook ne-KDE igcwele, ngiyabonga ngezindaba
Ngifuna ukuthola ukuphumula kwalokhu kusatshalaliswa ngoba angikwazi ukuthola i-amsn, kmess nezinto ezinjalo, futhi lezo eziza ngokuzenzakalela zithola iphasela elincane
Izindaba zeMandriva. Ngifunde ezindabeni uDrake ukuthi uMandriva usiletha izindaba ezintsha ngekusasa lakho.
Kuyamangalisa. Iqiniso ngukuthi, ngibona sengathi yiROSA engenze ngamthanda uMandriva 2011, kubi kakhulu lokhu kuphelelwe yisikhathi (updates). Mhlawumbe kungumqondo wami nje, kepha ngicabanga ukuthi uMandriva angabuyela ezinsukwini zenkazimulo, uma benganaka kakhulu izinhlobo zezinhlelo zokusebenza.
Uqinisile mayelana nezinguqulo zezinhlelo zokusebenza, kuzodingeka silinde iRosa Desktop 2012, kepha le distro, ngombono wami othobekile, iyona engcono kakhulu yezindawo zokukhiqiza nezebhizinisi.
sawubona perso umbuzo lokhu kususelwa kuliphi i-distro, ngicabanga ukuthi ithi ku-debian angazi ????
Kususelwa kuMandriva 2011 😉
marco matthew kusho
Usizo. Ngisanda kufaka i-rose 2012, kepha nginenkinga ngesilawuli esingenantambo, angikwazi ukusenza sisebenze, ngekhebula uma usidonsa, ngicela usize.
i-hp pavilion dv2000 ilaptop,
Phendula kumarco mateo
UMarco Antonio kusho
Halala kubhulogi yakho. Ngingathanda ukwazi ukuthi kungenzeka yini ukufaka iRosa kanye ne-Ubuntu ne-Windows 7. Sanibonani
Phendula uMarco Antonio
Yebo kungenzeka, futhi sibonga silula kwisifaki sikaRosa.
Yize ngalesi sikhathi usuyifakile kudala .. XDD
I-Xfce 4.10 manje isingafakwa ku-Xubuntu kusuka ku-PPA esemthethweni
Ukuthola i-CLI: Kusuka ku-wma uye kwi-mp3 ngezinyathelo ezi-2